Wararka Maanta: Khamiis, Jun 14, 2012-Midowga Afrika oo sheegay in Somalia la geynayo Ciidammo Booliis ah oo gacan ka geysta xaqiijinta Ammaanka Muqdisho
Ku-xigeenka wakiilka ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Wafula Wamunyinyi oo Muqdisho kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ciidamadan booliiska ah ay ka caawin doonaan booliiska Soomaaliya sidii ammaanka caasimadda lagu sugi lahaa.
"Ciidamada booliiska ay waxay ka imaanayaan dalalka Nigeria iyo Uganda, waxaana dal walba ka imaanaya 140 askari," ayuu yiri Wamunyinyi, isagoo intaas ku daray inay ciidamadaas ka shaqeyn doonaan sugidda ammaanka, ka hortagga dambiyada iyo soo celinta ammaanka.
Dhanka kale, Wamunyinyi wuxuu sheegay in saraakiisha Kenya aysan ka hadli karin howgallada ciidamada Kenya ee ku sugan Koonfurta Soomaaliya, isagoo sheegay in ciidamada Kenya ay si toos ah u hoos-tagayaan taliyaha AMISOM, Jen. Andrew Gutti isagana uu ka warbixin doono howlgalladooda.
"Ciidamada Kenya waxay si rasmi ah uga mid noqdeen AMISOM, sidaa daraaddeed kama hadli karaan madaxda Kenya howgallada ciidamadaas, mas'uuliyadooda waxay saaran tahay AMISOM," ayuu yiri Wafula Wamunyinyi,
Gobollada Gedo iyo Jubbada hoose ayaa waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore ku sugnaa ciidammo Kenyan ah oo dagaal kula jiray Al-shabaab, iyadoo uu ku soo beegmayo hadlaka Wafula iyadoo Kenya ay bishan horraanteedii si rasmi ah uga mid noqotay howgalka AMISOM.
Ugu dambeyn, ergaygu wuxuu ku boorriyay madaxda Soomaalida inay dhameytiraan howlaha siyaasadeed ee horyaalla, isagoo sheegay in guulaha ciidan ee la gaaray oo keliya aan lagu soo celin karin ammaanka iyo deggenaashaha Soomaaliya.
"Waxaan ku dhawaannahay xilligii lasoo gabgabeyn lahaa KMG-nimada, waxaana loo baahan yahay in la dadajiyo howlaha harsan, waxaana hoggaamiyeayasha Soomaalida uga digayaa hadallada carqaladeyn kara guulaha ciidan ee la gaaray, kuwaasoo ka hirgalay Muqdisho iyo deegaanno kale oo dalka ka tirsan," ayuu yiri Wamunyinyi.
Ururka Midowga Afrika ayaa waxaa ka jooga Soomaaliya in ka badan 10,000 oo askari kuwaasoo qaarkood la geeyay gobollada Baydhabo iyo Baladweyne oo ka kala tirsan gobollada Bay iyo Hiiraan.